Andy Robertson Oo Markii Uu Ganaaxa FA-ga Ka Badbaaday Haddana Dhaliishii Ugu Xumayd U Soo Jeediyay VAR Iyo Garsoorka Premier League. - Gool24.Net
Andy Robertson Oo Markii Uu Ganaaxa FA-ga Ka Badbaaday Haddana Dhaliishii Ugu Xumayd U Soo Jeediyay VAR Iyo Garsoorka Premier League.
Difaaca bidix ee kooxda Liverpool ee Andy Robertson ayaa dhawaan ka badbaaday ganaax uu ku mutaysan karay aflagaadadii uu u gaystay garsoorihii kulankii Anfield ee ay Reds barbaraha la gashay kooxda Burnley.
Laakiin Andy Robertson ayaa wali u muuqda mid aan ka tanaasulin doodii iyo cadhadii uu ka qaaday in rekoodhe lagu abaal marin waayay dhamaadkii kulankii Burnley wuxuuna dhaliil cusub u soo jeediyay VAR iyo garsoorka Premer Leageu.
Andy Robertson ayaa ku dooday in horyaalka Premeir league uu galay xili hubtani la’aan ah oo dhinaca go’aan qaadashada garsoorka ah wuxuuna ku dooday in garsoorayaashu noqdeen kuwo ku tiirsan VAR balse uu VAR isna noqday mid aan go’aanada sixitaan ku samaynayn.
Andy Robertson oo ka hadlaya arintan ayaa yidhi: “Todobaadkii hore,aniga ahaan waxaa jiray afar ama shan go’aan oo aan filayay in ay waajib ahayd in ay dhinaca kale u socdaan. Waxaan filayaa in dad badan oo kubbada cagta ahi ay qasab tahay in ay iyaguna dhinaca kale in ay u socoto u arkaan”.
Kadib Roberson ayaa ku dhiiraday in uu soo bandhigo dhaliisha ugu wayn ee uu ka arkay garsoorka Premier league iyo VAR wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan aaminsanahay in garsoorayaashu ay ku tiirsan yihiin VAR, laakiin VAR ma badalayo wax go’aamo ah, sidaa daraadeed waxaynu ku jirna hubanti la’aan”.
Robertson ayaa cadaystay sida uu VAR u neceb yahay wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan door bidi lahaa in aynaan haysan lahayn isla markaana uu garsooraha oo kaliyi dhawaaqo. Haddii uu garsooruhu sheego, waxaad odhanaysaa waa “Hagaag” si ka duwan ayuu u arkayay”.
“Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in aynu haysano 40 kamaradood oo 40 dhinac ah, waxaan aaminsanahay in go’aanka ay waajib tahay in uu sax noqdo”. ayuu Robertson doodiisa raaciyay.
Intaas kadib Robertson ayaa qirtay in ayna ahayn in uu adeegsado erayadii aflagaadada ahaa ee uu garsoore David Coote uu kula dhacay wuxuuna sidoo kale sheegay in uu daawaday muuqaalkii ay kamaradu ka duubtay.
Robertson oo dhacdadii Anfield ee rekoodhaha loogu diiday iyo erayadii uu ku falceliyay ka hadlaya ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waan arkay muuqaalkii tan iyo markaas la wareejinayay, waxaa waajib ahayd in aanan isticmaali lahayn luuqadaas, laakiin waxaanu ku jirnay kulan cadaadis sare lahaa isla markaana xariiqda ayay qiiradu saarnayd”.
“Waxaan kadib garsoorayaasha iyo saraakiisha kula hadlay tunnelka, waxa uu ii sharaxay wixii uu arkay ee uu ka fikirayay, taas waan ixtiraamay, dhamaan garsoorayaasha oo dhami taas ma sameeyaan, sidaa daraadeed cadaalad ayay u ahayd, laakiin waxaan wali ka fikirayaa in uu qaldanaa oo ay rekoodhe ahayd”.